Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » COVID-19 dethrones 1918 flu noho ny areti-mandringana mahafaty indrindra ao Etazonia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny isan'ny maty voalaza fa avy any COVID any Etazonia dia hihoatra ny isan'ny trangan'aretina flu 1918 amin'ity volana ity. Tsy afaka mihamafy amin'ny loza mitohy, ary azo sorohana amin'ny ankapobeny.
Ny fahafatesan'ny US COVID-19 dia 675,000 1918 ambony, miaraka amin'ny coronavirus misolo ny gripa XNUMX no valan'aretina amerikana maty indrindra.
Misy 42,000,000 ny trangana aretina COVID-19 any Etazonia hatreto.
Ny gripa tamin'ny 1918 dia namono Amerikanina 675,000 XNUMX teo ho eo ary noheverina fa areti-mando mahafaty indrindra tamin'ny tantara farany teo
Hatramin'ny 4:21 hariva Atsinanana ny Fotoana Alatsinainy 20 septambra, 675,446 19 ny Amerikanina namoy ny ainy noho ny areti-mifindra COVID-675,000, araka ny isa nataon'ny Johns Hopkins University, ka nihoatra ny 1918 ny isan'ny maty amerikana nandritra ny areti-mandringana tamin'ny XNUMX.
Ny totalin'ny tranga COVID-19 any Etazonia dia maherin'ny 42 tapitrisa.
Ny isan'ny maty dia antenaina hitombo hatrany satria i Etazonia dia miaina onjan'ny aretina vaovao indray ankehitriny, izay ateraky ny karazana Delta miparitaka haingana.
“Ny isan'ireo maty voalaza fa avy amin'ny COVID any Etazonia dia hihoatra ny isan'ny trangana gropy tamin'ny 1918 tamin'ity volana ity. Tsy afaka ny ho tonga mafy fo isika amin'ny loza mitohy, ary azo sorohana amin'ny ankapobeny, ”hoy ny bitsika Tom Frieden, lehiben'ny Centres for Disease Control and Prevention, herinandro lasa izay.
Ny gripa 1918 dia namono Amerikanina 675,000 XNUMX teo ho eo, araka ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina ary noheverina fa areti-mandringana nahafaty an'i Amerika indrindra tato ho ato.
Nandritra izay fotoana izay, Ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden dia hahazo ny tifitra booster COVID-19 amin'ny fahitalavitra, hoy ny sekretera mpanao gazety ao amin'ny White House, Jen Psaki, tamin'ny alatsinainy. Biden dia tapa-kevitra ny hanao vaksinin'ny Amerikanina ao anatin'ireo tsikera ankavanana momba ny didin'ny vaksiny.